जनप्रतिनिधिले ६,३३८.७५ भन्दा बढी तलबभत्ता लिन मिल्दैन
09:16 pm NST
केही समययता सरकार र राजनीतिक दलहरुले देश र जनतालाई घात हुने जेजस्ता कामहरु गरिरहेका छन्, यस हिसाबले अहिले मुख्य जिम्मेवार रहेका दलहरुको ‌अौचित्य मात्र समाप्त हुने होइन कि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै अन्त्य हुने संभावना मैले देखिरहेको छु ।
'लोकतन्त्रमा त लोकको आवाज सुनिनु पर्ने हो । जनभावनाविरोधी काम गर्ने अनि यसो नहोस् भनेर जनताले जति फलाके पनि कत्ति सुनुवाइ नगर्ने यस्तो पनि लोकतन्त्र हुन्छ ?' जनताले अहिले सर्वत्र यस्तो प्रश्न गरिरहेका छन् । चाहे सामाजिक संजालमा होस्, सडकमा वा सार्वजनिक यातायातमा हिंड्दा सबैको मुखबाट यही आक्रोश सुनिने गरेको छ ।
पछिल्लो जनविरोधी काम भनेको सांसद्को तलबभत्ता वृध्दि हो । यो अौचित्यहीन छ भनेर सबै मिडिया, सामाजिक संजाल तथा जनताले भनिरहेका छन् तर जनप्रतिनिधि यसलाई सुनेको नसुन्यै गरिरहेका छन् ।
केहीअघि मैले एउटा अन्तरवार्तामा भनेको थिएँ- कथाले मागेअनुसार अंगप्रदर्शन गर्छु भन्ने नायिका र जोगी बन्न राजनीति गरेको होइन भन्ने नेता एउटै हुन् । घटनाक्रमले यसलाई पुष्टि गर्दै लगेको छ । वास्तवमा राजनीति गर्ने भनेको जोगी बन्नलाई नै हो । धनी बन्नलाई त व्यापार-व्यवसाय गर्नुपर्छ अर्को उपायबाट धनी बन्न पाइँदैन । जागिर खाएर पनि धनी बन्न पाइँदैन । सामान्य जीविकोपार्जन गर्न मात्र सकिएला । तर नेपालमा त नेता र जागिरदार पो धनी बन्दै गइरहेका छन् । कस्तो अनौठो !
सांसद् एवं मन्त्रीहरुले विनापारिश्रमिक काम गर्नुपर्छ यदि उनीहरुले साँच्नै देश र जनताका लागि राजनीति गरेका हुन् भने । अहिलेको आधुनिक युगमा विनापारिश्रमिक काम गर्न सकिंदैन भने नेपाली जनताको अौशत आम्दानीभन्दा बढी तलब लिने हक उनीहरुलाई छैन । अर्थमन्त्री रामशरण महतले व्यवस्थापिका संसदमाआर्थिक वर्ष ०७१/७२ को आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्दा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी ७६ हजार ६५ रुपैयाँ पुगेको उल्लेख गर्नुभएको थियो । यस हिसाबले सांसद् एवं मन्त्रीले प्रतिमहिना तलब-भत्ता, सम्पूर्ण सुविधा मासिक रु ६,३३८.७५ भन्दा बढी लिनु हुँदैन । जनताको अौशत आय बढ्ने काम उहाँहरुले गर्नुभयो भने त्यही आधारमा तलबभत्ता बढाउँदै लैजानु अौचित्यपूर्ण हुन्छ ।
सारा मिडिया, जनताले चिच्याएर बोल्दा त कुनै कुरा कार्यान्वयन हुँदैन भने यो सुझाव उहाँहरुले मनन गर्ने आशा त छैन तर पनि खबरदारी गर्न नछाडौं । उहाँहरु सुध्रिनुहोस् । नेपालीले फेरि अर्को आन्दोलनको अाँधीबेहरी अनि राजनीतिक परिवर्तन खेप्न नपरोस् भन्ने कामना मात्र हो मेरो ।अब आउने नयाँ व्यवस्था पनि जनमैत्री हुने निश्चित छैन !!